Zavatra dimy tokony hataonao isan'andro mba ho salama | Bezzia
Susana Garcia | 06/04/2021 20:00 | Torohevitra momba ny fahasalamana, fahasalamana
Ny fahasalamana dia resaka vintana indraindray, satria misy ifandraisany betsaka amin'izany ny fototarazo, saingy izy io koa dia misy ifandraisany amin'ny fomba fiainana entintsika ary amin'ny zavatra rehetra ataontsika. Ny fihetsika tsirairay sy ny fahazarana tsirairay dia misy fiantraikany amin'ny vatantsika ary miafara amin'ny vokany eo amintsika, ao anatin'ny fotoana fohy na maharitra, noho izany dia tsy maintsy tadidintsika fa tsy maintsy manao zavatra sasany isika mba ho salama ary hanana fiainana salama ahafahantsika mahatratra ny fahanterana amin'ny fomba fiaina tsara.
Ho hitantsika eo Zavatra dimy tokony hataonao isan'andro mba ho salama amin'ny fotoana maharitra. Hazakazaka lavitra be ity ary ireo fihetsika lehibe izay mahatonga anao hahatsapa ho tsara kokoa dia tsy misy ilana azy ny fihetsika tsara iray andro. Tena tokony hanao zavatra ianao mba hanana fiainana salama. Ireo karazana zavatra ireo dia anisan'ny fomba fiainanao ary fihetsika isan'andro ahafahanao mitandrina ny tenanao.
1 Fitsaharana milamina
2 Sakafo voalanjalanja
3 Manaova fanatanjahan-tena isan'andro
4 Misotroa rano
5 Sorohy ny adin-tsaina
Raha te-ho sitrana isan'andro sy hanana fiainana salama dia ilaina tokoa ny miala sasatra mba samy ho sitrana ny vatana sy ny saina. izany voaporofo fa raha tsy matory tsara isika dia leo kokoa, voafintina ary sorena. Ka tsy ny torimaso ora fotsiny no resahina, fa ny ambiny kosa manana kalitao. Andramo fa ny zavatra rehetra ao amin'ny efitrano dia mahasoa mba hiala sasatra. Sorohy ny efijery ary aza apetraka ny fahitalavitra, satria mahatonga anao tsy hatory tsara. Mampiasà kidoro tsara izay manampy anao hiala sasatra ary handray ny maripanan'ny efitrano. Azonao atao ny manampy ny tenanao amin'ny zavatra sasany toy ny hanitra mampitony na feo manampy anao hiala sasatra. Ny fanomanana ny habaka dia zava-dehibe, na dia tokony hisoroka ny fisakafoanana lehibe sy fanaovana fanatanjahan-tena amin'ny ora fatoriana aza ianao, satria hampavitrika anao izany. Raha tsy afaka matory tsara ianao amin'izany rehetra izany dia mety ilaina ny manatona mpitsabo manokana.
Fantatsika rehetra ny atao hoe sakafo voalanjalanja. Mila mihinana voankazo sy legioma isan'andro ianao, ankoatry ny fisorohana ny sakafo voahodina, satria ireo no manimba indrindra. Raha te hanana fihoaram-pefy ianao dia tokony ara-potoana fotsiny fa tsy isan'andro. Isan'andro dia tokony hihinana sakafo maivana sy isan-karazany ianao hisorohana ny sira, tavy na siramamy be loatra. Raha mianatra mankafy sakafo voajanahary bebe kokoa ianao, rehefa mandeha ny fotoana dia tsy mila mihinana sakafo misy siramamy na tavy be loatra intsony ianao ary ho hitanao ny fahatsapanao tsara. Ny sakafo tsara dia manampy antsika hanana fifindran'ny tsinay tsara, fahasalamana ary fandevonan-kanina tsara.
Angamba aza mahatsiaro manao fanatanjahan-tena mafy isan'andro, fa afaka manao fanatanjahan-tena sy mihetsika isan'andro ianao. Zava-dehibe ny fampihetseham-batanao na dia handeha haingana be aza ianao, manaova fanatanjahan-tena mba hanitarana na hatanjahana. Ny manisa dia tsy mipetraka mandritra ny tontolo andro na tsy manao na inona na inona, satria na fihetsika kely aza dia manisa amin'ny farany ary manampy antsika ho salama kokoa. Miezaha mitady izay tianao, manaova fanatanjahan-tena isan-karazany ary ankafizo izy ireo.
Na dia marina aza fa tia zava-pisotro mamy daholo isika na koa misy toaka, ny tena marina dia ny rano no zavatra mahasalama indrindra azontsika sotroina. Ny fisotro rano isan'andro dia tena zava-dehibe Mila izany ny vatantsika. Azonao atao ny manao infusions nefa tsy asiana siramamy, satria mahasalama ihany koa izy ireo, na ampiana tsiranoka voasarimakirana ao anaty rano. Manampy anao hisotro bebe kokoa sy hanome tsiro azy io rehetra io.
Sorohy ny adin-tsaina
Eo amin'ny fiaraha-monina ankehitriny dia sarotra be izany, saingy ilaina ny mampihena ny haavon'ny adin-tsaina tsy mamokatra izay ananantsika na mety harary mihitsy aza isika. ny miteraka olana ny fihenjanana ary noho izany dia mila mianatra mifehy azy isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » fahasalamana » Zavatra 5 tokony hataonao isan'andro mba ho salama
Inona no hatao raha lavitra ny mpivady